कमेन्टमा Hello लेखेर भित्र गएर भिडियो हेर्नु होला” - Samachar Post Dainik
कमेन्टमा Hello लेखेर भित्र गएर भिडियो हेर्नु होला”
काठमाण्डौंको बानेश्वरमा बस्ने उनी हाल नेपाल कमर्श क्याम्पसमा बीबीए अध्ययनरत रहिछन् । घर भने प्युठानको बाग्दुला रहेछ । केहि समयअघि बसाइ सरेर राप्ती गाउँपालिका अर्थात हाम्रै गाउँमा आएका रहेछन् उनका परिवार । हामी त अब छिमेकी भएछौ नी नाम के हो भनेर मैले सोधेँ ।
उनले मुस्कुराउदै जवाफ दिइन् ‘छिमेकीको नाम अब आफै पत्ता लगाउनुस् म त नभन्ने ।’ यति भन्दा म केहि समय बोल्नै सकिन चुप लागेर बस्न बाध्य भए ।
मलाई अल्लारे केटा भनेर नाम भनिनन् कि ? वा फेसबूकमा रिक्वेस्ट पठाउँछ भनेर पो होकी ? नाम नभनेको, यति सोच्दै गर्दा उनले आफ्नो नाम सुनिता गाहा मगर (नाम परिर्वतन)भएको बताइन् । ** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
छिमेकीको नाता जोडिसकेको हुँदा अब हामीलाई एकअर्काबीच गफगाफ गर्न कुनै असहजता बाँकी थिएन ।गफ यसरी जम्न थाल्यो कि समय बितेको पत्तै भएन क्षणभरमा बुटवल पुगेछौं । अक्सर यति चाँडो बुटवल पुगेकोजस्तो अनुभव यसअघि मलाई भएको थिएन । उनले पनि मेरो बारेमा कुरा खोताल्न थालिन् ।
मैले आफ्ना बताउन मिल्ने जति सबै कुरा बताएँ । लामो समयदेखि स्वास्थ्य पत्रकारीता गर्दै आएको कुरा छुटाउने कुरै भएन । यति भनिरहँदा उनी एक्कासी केहि भावुक देखिइन् ।‘के भयो’ मैले सोधे ? उनी बोलीनन् ।
म पनि केही समय चुप लागेरै बसें । विस्तारै उनले भोगेको कुरा सुनाउन थालिन् ।
‘मैले तपाईलाई छिमेकी दाई मात्र भनेर होइन एउटा स्वास्थ्य पत्रकारको नाताले मेरो जीवनमा घटेको एउटा घटना सुनाउँदै छु ।’मेरो मनमा खुल्दुली जाग्न थाल्यो, के घटना होला भन्ने लाग्यो । कान एकतमास उनका ओठबाट निस्किएको आवाजमा फोकस भयो ।
‘केही सहयोग गर्न सक्छु की’ मैले सोधें । ‘हैन हैन मेरो समस्याको समाधान भइसक्यो, तपाईलाई सुनाउन मात्र लागेको’ उनले घटनालाई अलि सरलीकृत गरिन् ।** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७८, बुधबार ०३:४७